China Ladies ejiri aka mee akwa ajị atụrụ niile nwere ụta Njirimara Emeputa na Nweta | Fanshen
ANY AD MMA
• Nkeji edemede no: LG-006C
• Ogologo ajị anụ bụ ihe dịka 6-10mm ..
• Agba: nwa agba aja aja na agba ndị ọzọ
• nha anọ, S / 6.5, M / 7, L / 7.5, XL / 8, Nke nwere ike izute ọtụtụ ụmụ nwanyị.
• MOQ: 100 ụzọ abụọ
• Sekwa ​​akwa: aka kpara aka
Nke gara aga: Iesmụ nwanyị nwere ezigbo akpụkpọ anụ atụrụ na ajị anụ
Osote: Iesmụ nwanyị ejiri aka na-eme akwa atụrụ zuru ezu na njiri mara Njirimara
MILDSHEEP guzobere na 2002, mgbe ọ bụ ogbako aka, anyị nọ na-egbutu ma na-adụ aka ọrụ maka ndị ahịa mba ụwa ruo mgbe 2012, anyị malitere ire uwe aka site na anyị onwe anyị maka ndị na-azụ ahịa mba ụwa. ere na QC otu, anyị uwe aka, ụmụ ọhụrụ akpụkpọ ụkwụ na okpu rere Canada, Germany, UK na ọtụtụ mba ndị ọzọ. Anyị na-aga ọtụtụ mba ngosi kwa afọ, ọmụmaatụ, MIPEL, MIFUR na milano, APLF na Hong Kong. Anyị maara usoro na usoro iwu mba ụwa dị iche iche, makwaara usoro mbupụ, yabụ, Ajụjụ ọ bụla, biko egbula oge ime ka anyị mata! Anyị ga-eme ike m niile iji nyere aka!
1, uru ebe, companylọ ọrụ m dị na mpaghara Hebei, Ọ chọrọ ihe dị ka awa 3-4 ruo ọdụ ụgbọ elu Beijing. Ihe dị ka awa 5-6 gaa n'ụgbọ mmiri Tianjin n'ụgbọala, ọ dị ezigbo mfe maka mbupu ụgbọ mmiri. Na Hebei Provinc bụkwa ebe mgbakwasị ụkwụ maka imepụta akpụkpọ anụ atụrụ na China.Xinji Isi Obodo Isi Obodo na Daying fur, ha niile nọ na mpaghara Hebei.
2. Nnukwu mmepụta ikike Nkwado Nkwado. Dị ka ndị ahịa chọrọ, Anyị na-akwado ahaziri gụnyere ngwugwu.
3.QC.More karịa tem afọ ahụmahụ nke mbupụ, Anyị ụlọ ọrụ nwere a zuru ezu set nke QC system.Our QC otu ga-elele ihe onwunwe zuo, mmepụta, nkwakọ niile bụla ሂደቶች.Make n'aka na anyị ntụpọ ọnụego bụ ala karịa 0.1%
4.Handmade sraftswomen team, A na-eji aka aka mee akwa uwe anyị niile na-acha uhie uhie site na nsị. otu dị ka nke a!
1.Mgbe m ga - enweta ọnụahịa ahụ?
2.How ka m ga-esi nweta ihe nlele iji lelee ogo gi?
Mgbe nkwenye ọnụahịa, ị nwere ike ịchọ ka ihe nyocha iji lelee ogo anyị. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịlele maka ịlele ụdị ya na ogo ya, anyị ga - enye gị ihe atụ n’efu, ọ bụrụhaala na ị ga - akwụ ụgwọ ibu ngwa ngwa. Emekarị, The samples ga-adị njikere maka nnyefe n'ime 1 izu. A ga-ezitere gị ihe nlele site na awara awara ma bịarute na 3-5 ụbọchị ọrụ.
3.Gịnị bụ usoro gị nke nnyefe?
Anyị na-anabata FOB, CIF ugbu a.
4.Kedu maka oge mbubata maka imepụta igwe?
Emekarị, Mgbe gosi iji, 60-90 ụbọchị na-arụsi ọrụ ike oge, 30-60 ụbọchị na anya oge. Ma, Ọ bụrụ na ọ bụ obere iwu, Ọ ga-achọ izu 2-3.
Lambskin na-akwọ ụgbọala
Bsmụ nwanyị Lambskin Gloves
Lambskin uwe Mittens
Lambskin Gloves Wmụ nwanyị
Akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ Lambskin
Lambskin Ọrụ Uwe
Akpụkpọ anụ atụrụ na-enweghị mkpịsị aka Mittens
Iesmụ nwanyị na-enweghị atụrụ Mittens nwere arc ...
Ldies Ezigbo suede Lambskin uwe na-egosipụta w ...
Ejiri mee ladies ihu abụọ sheepskin uwe w ...
Iesmụ nwanyị Sheepskin na-enweghị aka Mittens nwere ro abụọ ...